Isibuko esine-smart kunye ne-iOS okanye into efanayo eyenziwe ngumqambi | Iindaba zeGajethi
Le vidiyo ibonisa ukuba ukwenza isipili kwizixhobo ezifanelekileyo akunzima kule mihla kwaye yile nto siyibonayo kwividiyo elayishwe yingqube Oko sikushiye ekuqaleni kwenqaku. Inyani yile yokuba ngaphandle kokujonga ujongano lwe-iOS, ayisiyiyo, kunjalo Inguqulelo eguqulweyo yenkqubo yokusebenza ye-Android, njengoko kusenzeka kwiifowuni zaseTshayina ze-iPhone esinazo namhlanje kwi-e-commerce yenethiwekhi.
Oko isipili esikrelekrele sisivumelayo kukujonga izaziso, ukubona ixesha, ukusibonisa ikhalenda kunye nokuqeshwa kwethu okanye ixesha. Oku kukubonakalisa ngokuthe ngqo kweso sixhobo kwaye ndicinga ukuba ndiyakhumbula ukuba ngexesha elidlulileyo sabona okufanayo kule nto, nangona kunjalo kubonakala ngathi inomdla kwaye inomdla igajethi yokwabelana nawe.
Isibuko singena kwimodi yokulala xa siyeka ukuyisebenzisa ukuze singasebenzisi amandla amaninzi kwaye nangona kuyinyani kufuneka jonga ukuba imizila yeminwe izakujongeka njani kwindawo enkulu yeglasiNdinomdla wokubona ukuba iphathwa njani ngokulula. Asicingi ukuba esi sipili siyakuthengiswa ubuncinci okwangoku, kodwa esi sibuko silumkileyo asiyombono ikude kakhulu.
Inyani yile yokuba siyayithanda le Mirror ye-Apple ngaphandle kokuba into eluncedo esisibonayo nayo ibonakala ingenamveliso kwabo bangaphambi kwabo ixesha elide, ukuba, kwabo bathanda ukuchitha ixesha elihle phambi kwesipili kunokuba yinto egqibeleleyo yokujonga oko sinokubona ulwazi oluvela kwi-smartphone yethu lubonakala kuyo.
Kucacile I-Apple ayinanto yakwenza nesi sipili nangendlela ye-anecdote ukusho ukuba le vidiyo ibikwi-YouTube ukusukela ngoSeptemba walo nyaka.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » elektroniki » Isibuko esine-smart kunye ne-iOS okanye into efanayo eyenziwe ngumqambi
Isamsung ithethathethana noLenovo ngentengiso yokwahlulahlula ikhompyuter